कम्युनिस्टहरुको भाषामा कुनैपनि अबैध यौन गतिविधिमा संलग्न भएकाहरुलाई सांस्कृतिक विचलन भनिन्छ । अझ विशेषगरी माओवादी जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट आएकाहरुले त यसलाई ठुलै अपराधको रुपमा लिने गरेको पाइन्छ । &nbsp
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक बर्षको बजेट १० प्रतिशतले घटाए भने राजस्वको लक्ष्य पनि घटाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै उनले १० प्रतिशत बजेट घटाएका हुन्। तर अर
विश्वभरि स्मार्टफोन, आइप्याड, आइफोनलगायत डिजिटल उपकरण र इन्टरनेट धेरै हदसम्म सर्वसुलभ भइसकेको छ । इन्टरनेट सबैभन्दा बढ्ता चलाउनेमा बालबालिका पर्छन्। बालबालिकाहरू विश्वको कुल जनसंख्याको ४८ प्रतिश
अहिले विश्वमा बहसको बिषय बनेको छ अबको युद्ध कस्तो हुन्छ ? ७५ बर्ष अघि अमेरिकाले जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा परमाणु बम प्रहार गरेको घटनाले अहिले पनि संसार त्रशित हुने गर्दछ । अबको परमाणु बम त्यो भन्द
काठमाडौं । वीरेन्द्रनगर–६ सुर्खेतका कमल पन्तले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा पुनः सामेल भएनन् । सरकारले गरिव परिवारलाई लक्षित गरि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत ल्याएको बहुचर्चित कार्यक्रम स
संसारको सबैभन्दा ठूलो सैन्य शक्ति हो अमेरिका। उसको रक्षा खर्च नै वार्षिक ७ खर्ब डलरभन्दा बढी छ। अमेरिकासँग ३० लाख सेना छन्। जो पृथ्वीका सात वटै महादेशमा पुगेका छन्। ४ हजार ८ सय स्थानमा अमेरिकी सेना तै
तपाइलाई सुन्दा अचम्म लाग्यो होला राजाले कट्टु र चप्पल मात्र लगाउछन र आफै रेष्टुरेन्ट र डुङ्गा चलाउँछन् भनेर । तर यो सत्य हो,एउटा यस्तो देश छ जहाका राजा सामान्य जीवनयापन गर्दछन । ठूला-ठूला साम्रा
सरकारको महत्वकांक्षी योजनामा रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता तथा योगदानकर्ताको आकर्षण नदेखिएपछि विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले कोषमा दर्ता हुनका लागि आफू मातहतका निकायलाई दवाव दिन थालेका छन्
हामी सबैले सुनेका छौ धेरै गल्ति गरे बाच्दा मात्र होइन मरेपछि पनि शान्ती मिल्दैन । यहि कुरा हिन्दु धर्ममा नराम्रो कामको फल यो जन्ममा मात्रै होईन,मृत्युपछि पनि भोग्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । यहि मान
अहिले नेपालमा एमसीसी चर्चामा छ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा संसदीय दलका प्रमूख सचेतक देव गुरुङले एमसीसी परियोजना अमेरिकाको ‘फुटाउ र राज गर’ रणनीति अनुरुप
मानिसहरु प्राय आफ्नो कर्म भनौ वा व्यवहारका कारण दुखि देखिने गर्दछ । हामीले बुज्नुपर्ने कुरा के छ भने, सुखको लागि न त पूर्ण ज्ञान आवश्यक छ न त अधिक आर्थिक हैसियत ? यहि बुझाउन सुरु भएको थियो बौद्ध